Farmaajo oo faragalin shisheeye ku eedeeyay fashilka wadahadaladda | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo faragalin shisheeye ku eedeeyay fashilka wadahadaladda
Madaxweynaha ayaa uga hadlay Khudbaddiisa arrimo badan oo ku saabsan Shirkii Dhuusamareeb.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa goordahw soo gabagabeeyay Khudbadiisii Gollaha Shacabka oo ku saabsanayd wadahadalladii fashilmay ee Dhuusamareeb.
Waxuu Farmaajo sheegay in intii uu socday Shirka sameeyay tanaasul badan, laakiin dhinacyada kale, gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland ay diideen in heshiis la gaaro.
Sida laga filanayay, Farmaajo ayaa Ismariwaaga siyaasaddeed ee dalka ku eedeeyay faragalin shisheeye "Arimaha doorashooyinka run ahaanti waxaa kiu jirta faragelin shisheeye, xaqiiqatan faregalintaas ayay wax noogu hagaagi la' yihiin" ayuu yiri Farmaajo.
Xildhibaanada ayaa ka codsaday inay soo dhex galaan Ismariwaagga taagan, islamarkaana ay la hadlaan Madaxda Puntland iyo Jubbaland si xal looga gaaro arrimaha doorashadda kahor inta uusan mudo xileedkiisa dhamaan.
Kulanka Gollaha Shacabka wali waa uu sii socdaa, sida uu sheegay Mursal marka uu baxay Madaxweynaha, waxaana la jaray SNTV Live-ka xarunta ka socday.
Mursal waxaa la sheegay inuu qorsheynayo inuu si kedis ah ugu dhawaaqo mudo-kordhin, iyadoo Xildhibaano loo diyaariyay ay gacan-taag ku ansxiin doonaan Mooshinka si lamid ah kii lagu riday July 2020 Khayre.